Philippe Coutinho oo u caddeeyay madaxda kooxda Barcelona go’aankiisa kama dambeysta ah – Gool FM
Philippe Coutinho oo u caddeeyay madaxda kooxda Barcelona go’aankiisa kama dambeysta ah
(Spain) 08 Juunyo 2019. Raadiyaha “Cadena SER” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday go’aanka kaga aadan xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho inuu sii joogo Barcelona, kaddib markii uu ku guuldareystay mudada sanadka iyo barka uu ku sugnaa garoonka Cump Nou.
Barcelona ayaa kula soo saxiixatay Philippe Coutinho xilli ciyaareedka 2018 qiimo gaarsiisan 160 million euros, balse wuxuu ku guuldareystay inuu soo bandhigo qaab ciyaareed la mid ah kii Liverpool oo kale.
Raadiyaha “Cadena SER” ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in Philippe Coutinho uusan ku faraxsaneyn Barcelona, kaddib markii uu daris la noqday kursiga keydka gaar ahaan kulamadii ugu dambeeyay xili ciyaareedka 2018/2019.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Philippe Coutinho iyo wakiiladiisa ay warqad u direen maamulka Barcelona, waxayna u sheegeen in ciyaaryahanka uu doonayo inuu baxo.
Barcelona ayaan aqbali doonin in Philippe Coutinho ay ku fasaxdo qiimo ka yar 105 ilaa iyo 110 milyan euro, kaddib markii ay ku soo iibsatay aduun dhan 160 million euros.
Waxaa jiri doono laba bilood ee suuqa kala iibsiga ah kahor inta aan la xirin, waxaa laga yaabaa in kooxo badan ee Yurub ah ay u dhaqaaqaan saxiixa Philippe Coutinho, iyadoo kooxaha sida xoogan u xiiseenya ay ka mid tahay Chelsea oo dooneysa inay ka dhigato badalka Eden Hazard, iyo sidoo kale kooxda Paris Saint-Germain.
DEG- DEG: Paris Saint-Germain oo shaacisay mudada uu maqnaanayo Neymar Jr